Iindaba - u-2020 ngunyaka oneziqhamo kuStamina, ngethamsanqa
U-2020 ngunyaka oneziqhamo kuStamina, ngethamsanqa
Siyigqibile iprojekthi enkulu evela e-Australia ngexesha, umxhasi wethu wenza indibano yomsebenzi ngoku. Basungule iprojekthi entsha efanayo nathi ngaphandle kwamathandabuzo kwiintsuku ezininzi ezidlulileyo, abade baxoxe ngawo nawuphi na umbuzo wobuchwephesha kunye nathi, siphose nje imizobo. Ikwayigubu, kodwa sisiqingatha sesilinda, inde kakhulu. Iinjineli zethu zisenza uphando olunzulu kwimizobo, xa zisenza oku, kufuneka zilibale zonke iiprojekthi ezidlulileyo, ukunqanda nayiphi na ingxaki okanye amava engxaki. Emva kokuxoxa kuwo onke amasebe ahambelanayo, sithathe isigqibo sokuyigqiba le projekthi kwiinyanga ezimbini.
Kwangelo xesha, ezinye iimveliso zethu kubathengi baseJamani nase-USA zigqityiwe kwaye zithunyelwa ngaphandle ngexesha, zonke zifumene ingxelo elungileyo.
Iziphumo zethu zingaphezulu kwama-200% okonyuka ngokuchaseneyo nonyaka ophelileyo, ngaphandle kwengxaki esemgangathweni kwaphela.
Isikali sethu sonyuselwa inyathelo ngenyathelo, kwafunyanwa abanye abasebenzi kunye namagcisa, saqesha enye indawo yokusebenzela enkulu.
Sathenga umatshini omkhulu we-lathe, onokuba ngumatshini ububanzi ukuya kuthi ga kwi-1200mm, ubude buye kwi-6m.
Impumelelo yethu ikwatsala umdla woorhulumente basekhaya. Urhulumente waseYantai FTZ uxanduva kakhulu, onke amasebe asebenza ngokukuko. Amasebe azalanayo eza izihlandlo ezininzi ezokutyala imeko yethu, azame ukusinceda ukuba senze inkqubela phambili. Siziva sinombulelo kakhulu.
U-GM wethu uJerry ubambe intlanganiso nabo bonke abasebenzi, wazisa imeko yenkampani, wathi enkosi kubo bonke abasebenzi, waphakamisa isicwangciso sethu sexesha elizayo, kwaye wagqiba kwelokuba anike izibonelelo ngakumbi kubasebenzi. UJerry wazisa i-Stamina's mission kwakhona. Amandla anamandla kufuneka asebenze njengenkampani enoxanduva, enoxanduva lokusingqongileyo, ejongene noluntu, enoxanduva lwabasebenzi.
Ngoku sazisa umhlaba wotyalo mali kwaye sizakhela eyethu indawo yokusebenzela.
Ithemba lokuqina unomso oqaqambe ngakumbi ngomso!